ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ကရာချိမှာ ပျက်ကျ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ကရာချိမှာ ပျက်ကျ
EDITORS NOTE: Graphic content / Rescue workers moveabody ofavictim from the wreckage afteraPakistan International Airlines aircraft crashed ataresidential area in Karachi on May 22, 2020. - A Pakistani passenger plane with nearly 100 people on board crashed intoaresidential area of the southern city of Karachi on May 22. (Photo by Asif HASSAN / AFP) (Photo by ASIF HASSAN/AFP via Getty Images)
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ် ကရာချိမှာ ပျက်ကျ
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း (PIA) ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စီး လာဟိုးမြို့ကနေ ပျံသန်းလာစဉ် ကရာချိမြို့မှာ ပျက်ကျခဲ့တယ်လို့ လေကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
Flight PK8303 ဟာ ခရီးသည် ၉၁ ဦးနဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ရှစ်ဦး တင်ဆောင်ပြီး လာဟိုးမြို့ကနေ ပါကစ္စတန်ရဲ့ အလုပ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဂျင်းနား နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ကို ပျံသန်းလာစဉ် ဒီနေ့ မေလ ၂၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ဒေသစံတော်ချိန် ၂ နာရီခွဲအချိန်မှာ ပျက်ကျခဲ့တာပါ။
အွန်လိုင်းပေါ် တက်လာတဲ့ ပုံတွေထဲမှာတော့ ကရာချိမြို့၊ မိုဒယ်ကိုလိုနီ အိမ်ယာဝန်းကျင်မှာ အပျက်အစီးတွေကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ရောက်ရှိနေပြီး သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းအချက်အလက် မရှိသေးပေမယ့် သေဆုံးမှုတွေ ရှိမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ လေယာဉ် ပျက်ကျတဲ့နေရာက အလောင်း ၁၁ လောင်းကို ကရာချိ ဆေးရုံဆီ သယ်သွားတယ်လို့ CNN သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
ခရီးသည်တင်လေယာဉ် Airbus A320 ဟာ ဂျင်းနား လေဆိပ်ကို မဆင်းမီ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုဒယ်ကိုလိုနီ အိမ်ယာအနီး ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း (PIA) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အာရှက် မာလစ်က လေယာဉ်ရဲ့ လေယာဉ်မှူးက ပျက်မကျခင်မှာ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ တွေ့နေတယ်လို့ သတင်းပို့ခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဘယ်လို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာလဲဆိုတာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
Previous articleတနင်္သာရီဝန်ကြီးချုပ်ကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ နဲ့ နေအိမ်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းဖို့ အမိန့်ချမှတ်
Next article(ICJ) ကို တင်မယ့် ကြားဖြတ်အစီအမံ ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာမှာ ဘာတွေ ဖော်ပြဖို့ လိုလဲ